TRATRAN’ NY ZANDARY AMBATOMANOINA NY DAHALO MIISA	9 KA ZAZA TSY AMPY TAONA NY 2
Andian-dahalo roa mpangalatr’omby, miisa 09 lahy no tratran’ny Zandary avy ao amin’ny Borigady Ambatomanoina ny 15 Septambra lasa teo. Fantatra fa zaza tsy mbola ampy taona ny roa tamin’ireo mpangalatr’omby ireo, izay voalaza fa nangalatra omby miisa 03 tao amin’ny tanana iray antsoina hoe Ambohiroa Ambalabako. Ireo 07 lahy hafa kosa dia tsy vitan’ny nangalat’omby fa nanery ihany koa ireo tompon’omby mba handoa vola mitentina 900.000 Ar tamin’izy ireo. Taorian’ny velam-pandrika nataon’ny Zandary no nahatrarana ireo dahalo miisa 07. Tafaverina tamin’ny tompony ihany koa ny omby 02 tamin’ireo 04 nangalariny.
Mikasika ireo zaza tsy ampy taona dia ny 08 Septambra lasa teo no fantatra fa nanaovan’izy ireo ny asa ratsiny. Mpiandry omby iray no nifirain’izy ireo tamin’ny famaky ny lohany. Nangalarin’izy ireo ny omby 03 avy eo. Tsy mbola hita moa ireto omby ireto hatramin’izao. Niaiky ny zava-bitany izy roalahy ireto ary nilaza ihany koa fa mbola misy naman’izy ireo mirenireny any. Eo am-pitadiavana azy ireo ny Zandary amin’izao fotoana.
Natolotra ny fampanoavana androany 20 septambra 2011 moa izy 09 lahy ireo.
Marihina fa manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy ny zandary any amin’ireny faritra ireny amin’izao fotoana izao noho ny firongatry ny asan-dahalo maro. Efa mivoatra tokoa ny asa ratsy ataon’ireny dahalo ireny satria dia efa tonga hatrany amin’ny fakana takalon’aina na fakana an-keriny fananan’olona ihany koa.
Izy sivy mpangalatr'omby tao Ambatomanoina : Sary ZP